Nandrolone Decanoate budada - Nandrolone phenylpropionate powde
/blog/nandrolone decanoate , Nandrolone Phenylpropionate/Nandrolone Decanoate budada - Nandrolone phenylpropionate powde
Posted on 04 / 05 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate.
waa maxay Nandrolone Duufaan cad(Deca)?
Nandrolone Decanoate waa steroid aad loo jecel yahay oo ka kooban hormoonka steroidal Nandrolone wuxuuna ku lifaaqan yahay dhererka 'Decanant'. Hormarka Nandrolone wuxuu marka hore u muuqday 1960 waxaana loo sameeyay adeegsiga ganacsiga ee 1962 by Organon sida magaca ganacsiga Deca Durabolin. Laga soo bilaabo wakhtigaas badanaa Nandrolone Decanoate ayaa ku dhuftey suuqa, laakiin Deca Durabolin ayaa weli ah tan ugu caansan. Tani maahan kooxdii ugu horeysay ee Nandrolone oo abuurnay, taas oo ka tirsanaan lahayd Organon's Durabolin, oo gaar ahaan Nandrolone Phenylpropionate. Qaybta Phenylpropionate waa wax aad u dhaqso badan oo leh waqti yar oo firfircoon, halka qaababka Phenylpropionate ay caan ku yihiin, Deca Durabolin ayaa si weyn u soo jiitay suuqa Suuqa Nandrolone.
Nandrolone Decanoate waa mid ka mid ah daawooyinka ugu badan ee lagu isticmaalo daawooyinka anabolic ee ka midka ah ciyaartoyda kor u qaadaya ciyaaraha. Waxaa si fiican loo yaqaanaa inuu yahay mid si wanaagsan u shaqeynaya steroid-ka ballaaran, laakiin sidoo kale waxa uu jecel yahay goobo badan oo ciyaaraha fudud ah oo loogu talagalay faa'iidooyinka daaweynta. Iyadoo ay jirto faa'iidooyin daaweyneed oo wanaagsan, hormoonka Nandrolone waa mid ka mid ah farsamooyinka anabolic ee ugu faa'iidada badan ee ku jira dhaqanka caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, sannado badan oo ka mid ah dhibaatooyinka anabolic steroid ee isticmaalka noocan oo kale ah ayaa aad u yaraaday Maraykanka muddo sanado badan ah. Dibedda Maraykanka ee Deca Durabolin ayaa weli ah mid caan ka ah qorshayaasha daaweynta daaweynta ee dabooli kara goobo badan oo ka mid ah goobaha.
waa maxay Nandrolone phenylpropionate(NPP)?
Nandrolone Phenylpropionate waa steroid anabolic taas oo aad ugu egtahay midka caanka ah ee Nandrolone Decanoate. Si kastaba ha ahaatee, Nandrolone Phenylpropionate wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee Nandrolone oo waligeed iibiyo ganacsi. Nandrolone Phenylpropionate ayaa ku dhuftey roogaga 1950 waxaana la keenay suuqa by Organon oo hoos timaadda Durabolin. Wax yar ka dib markii Organon uu sii deynayo xaaskii Decanoate ee hoos timaada Deca Durabolin.
Nandrolone Phenylpropionate waa saldhig yar oo saliideed ah oo anabolic steroid ah waxaana caadi ahaan loo yaqaan NPP. Qalabkan waligeed ma noqon mid caan ah sida muuqaalka weyn ee 'esterate esterate', qayb ahaan sababtoo ah helitaanka; Si kastaba ha ahaatee, xilligii casriga ahaa waxa uu bilaabay inuu arko dib u soo noqoshada labadaba isticmaalka iyo helitaanka fursad ay uga mahadcelinayaan qayb ka mid ah shaybaarrada dhulka hoostiisa.
waa maxay Nandrolone Duufaan cad?
Magaca: Nandrolone Decanoate / DECA
Qaaciddada Molecular: C28H44O3
Miisaanka Molecular: 428.65
Dhibcaha Dhibcaha: 33-37 ℃
Kaydinta Kaydinta: 2-8ºC
Midab: Caddaan u fududahay budada crystalline huruud ah
waa maxay Nandrolone phenylpropionate budada?
Magaca: Nandrolone phenylpropionate / NPP
Qaaciddada Molecular: C27H34O3
Miisaanka Molecular: 406.57
Dhibcaha Dhibcaha: 85-87 ° C
Kaydinta Kaydinta: -20ºC
Midab: Caddaan ama cad cad Budada Crystal
Nandrolone Qalabka Duufaanta Daaqa:
Deca Durabolin waa steroids aad u gaabis ah oo aan u baahnayn in lagu mudo dhammaan inta badan. Qorshayaasha daweynta badankood ee daaweynta ayaa keli ah oo kaliya lagu sameeyaa toddobaad kasta oo 2-4 oo leh todobaad kasta oo 3-4 oo aad u badan. Ka-reebitaanku wuxuu ku jiraa daaweynta dhiig-yaraanta; marka la daaweynayo dhiig-yaraan Deca Durabolin waxaa caadiyan la qaadaa hal mar toddobaadkii. Caawin kasta oo la xidhiidha waxqabadka, hal cirbiti oo isbuuc ah toddobaadkii ayaa ka badan kan ku habboon. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa dooran doona in ay labadoodu u kala kala baxaan laba jeer oo yar oo isbuuc ah si loo yareeyo wadarta miisaanka la isku duro.
Heerka qiyaasta daaweynta ee Deca Durabolin caadi ahaan waxay ku dhacdaa 100mg kasta oo ah 2-4 kala duwan ee daaweynta aasaasiga ah ee daaweynta iyo 100-200mg asbuucii daaweynta dhiig-yarida. Cayaartoyda raadinaya dibudhisid iyo gargaar, 100mg asbuucii waa meel fiican oo bilawga ah, laakiin badankooduna aad ayay ugu faraxsanaan doonaan 200mg natiijooyinka asbuucii. Daaweyn noocan oo kale ah ayaa hubin doonta in dib u soo kabashada, gargaarka, iyo dulqaadkuna dhammaantood la kobciyo iyo sidoo kale bixinta kor u kaca ah ee anabolis. Xaqiiqooyinka asaasiga ah ee anabolic, 300mg asbuucii ayaa caadi ahaan loo tixgeliyaa qiyaasta hoose. Dad badan ayaa hela 400mg wiiggii si ay u noqdaan heerka qiyaasta saxda ah, iyo in ka sii muhiimsan, si fiican u xaddidan heerarka la kontrooli karo. Rag badan ayaa laga yaabaa inay u dulqaadan karaan qiyaaso u sarreeya 600mg asbuucii. Tani waxay kordhin doontaa khatarta dhibaatooyinka caanka ah iyo inta badan 400mg toddobaadkii waa wax ka badan kan ku filan, hase yeeshee xaalado kala duwan ayaa soocaya natiijada qofka.
Deca Durabolin waa in aan loo isticmaalin in ka yar toddobaadyada 8 marka loo isticmaalo qalab kor u qaadista. Maaddadu waa mid aad u tartiib tartiib ah, shaqsigu wuxuu u baahan doonaa inuu isticmaalo waqti dheer si uu abaalmar u helo. Siddeed usbuuc waa inay ahaataa ugu yaraan, laakiin marba markaa la joojiyo dhismuhu wuxuu wali sii ahaan doonaa firfircoonida jirka muddo dhowr toddobaad ah. Maadaama toddobaadka 8 ay tahay ugu yaraan, toddobaadka 10-12 wuxuu noqon doonaa mid aad loogu aqbalo ragga. Isticmaalkoodu wuu kala bixi karaa marxaladan, laakiin marar dhif ah ayaa lagula talinayaa; badankood ma hirgelinayaan wareegyada wax ka badan saacadaha 12-16 ee ka baxsan goobaha waxqabadka adag, iyo xaaladahaas, wareegga hormoonada hormoonka steroidal ah ayaa lagula talinayaa.
Ciyaartoyda haweenka ah, 50mg asbuuc kasta oo aan ka badnayn todobaadyada 4-6 inta badan waa kuwa loo dulqaadan karo. Waxaa jiri doona qaar ka mid ah kuwaas oo awoodi kara inay xakameeyaan 100mg toddobaadkii, laakiin sida qiyaasta sida caadiga ah waxay caadi ahaan soo saari doontaa astaamaha cirridka haweenka intooda badan. Qorshaha daaweynta daaweynta caadiga ah, Deca Durabolin sida caadiga ah waxaa lagu maamuli doonaa 50-100mg todobaad kasta 3-4. Marka lagu daaweeyo dhiig-yaraan, 50-100mg wiigii waa asbuucii.
Qiyaasta Nandrolone phenylpropionate:
Xaaladda caafimaad ee caadiga ah ee lab ah Nandrolone Phenylpropionate ayaa caadi ahaan ku dhici doona 50-100mg wiiggii. Isticmaalka haweenka, inkasta oo aan sida caadiga ah loo qorin haddii la qoro waxay caadi ahaan noqon doontaa 50mg wiig kasta. Dhammaan goobaha caafimaad ee ku dhow dhammaan qaybta caafimaadka ee Decanoate waa waxa loo qori doono.
Iyadoo aan loo eegin isticmaalka qaadashada qiyaasta daawada ayaa caadi ahaan loo kala qeybiyaa saddex cirbadood oo isku mid ah toddobaadkiiba ama la qorsheeyey maalin kasta oo ku saleysan natiijooyinka ugu wanaagsan. 8-12 waa xilliga caadiga ah ee isticmaalka badmaaxiinta. Ka-baxsan waa cayaaraha gabdhaha oo isticmaali kara steroid toddobaadyo 4-6 iyo sida caadiga ah qadar aan ka badnayn 50mg toddobaadkii haddii la iska ilaaliyo fuuq-baxa.
Faa'iidooyinka iibso budada Nandrolone laga bilaabo AAS Nandrolone iibiyaha budada:
Waxaan dammaanad ka qaadeynaa nadiifnimada ugu sarreysa dhammaan budooyinka> 98%, iyo sababta oo ah annagu waxaan nahay soo saare ma nihin tafaariiqle, dhammaan badeecadaha halkan yaal waxaa toos loogu iibiyaa qiimaha ugu hooseeya
3) Heerka ugu sareeya ee gaarsiinta gaarsiinta waa ka sarreeyaa 98%.
2) Jawaab celinta isticmaalaha waa la qadarin doonaa, talooyinkaagu waxay nagu dhiirrigalin doonaan inaan horumarino adeegeena, waana masuuliyadeena inaan la kulanno dhammaan shuruudaha macaamiisha.
3) AAS waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu kalsoonida badan ee alaabta ceeriin ee steroid leh alaab tayo fiican leh, dhoofinta ammaan iyo deg deg leh oo leh adeeg wanaagsan.
Tags: iibso budada Nandrolone Decanoate, Nandrolone Duufaan cad
Testosterone Budada aan dhicin ee loogu talagalay jirka dhismaha	20 Waxyaabaha ugu Muhiimsan Waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xashiishka Lorcaserin HCL